ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ USD, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း MMK — USD ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
0,00 USD ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/USD ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 02:49
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး (USD). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 02:49.
ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို USD) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် အမေရိကန်ဆာမိုအာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို, British Virgin Islands, US Virgin Islands, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမိုင်းနာ​​းပြင်ပကျွန်းများ, အရှေ့တီမော, ဂူအမ်ကျွန်း, မာရှယ်ကျွန်းစု, Micronesia, Palau, Puerto Rico, မြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, တာ့ခ်နှင့် Caicos ကျွန်းစု, အီကွေဒေါ.
ရက်စွဲ 25.10.2020 02:49
1 1 287,14
56435,71
10 12 871,41
50 64 357,07
100 128 714,13
200 257 428,27
500 643 570,67
1000 1 287 141,35
20002574 282,70
50006435 706,75
10000 12 871 413,49
20000 25 742 826,98
50000 64 357 067,45
ငွေကြေးက ISO code ကို USD
အထိမ်းအမှတ် $ • US$
တာ့ခ်နှင့် Caicos ကျွန်းစု
အနု Dime (1/10), ရာခိုင်နှုန်း (1/100), Mill (1/1000)
ဒင်္ဂါးပြား 1 နှင့်5ဆင့်, 1 dime, 1/4, 1/2 နှင့် 1 USD
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 1, 2, 5, 10, 20, 50 နှင့် 100 USD
ပြဿနာများ၏ဘဏ် က Federal Reserve System ကို
ထုတ်လုပ်သူငွေစက္ကူတွေ အက္ခရာ တင်. နှင့်ပုံနှိပ်၏ဗျူရို
ပူစီနံ ယူနိုက်တက်စတိတ် Mint,
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.038 s.